Ungalusebenzisa njani uvavanyo lwe-Apple Hardware kwiiMacs ezithengiswe ngoJuni 2013 | Ndisuka mac
Okokuqala siza kuthi yile Vavanyo lweHardware yeApple ekwabizwa ngokuba yi-AHT, ibandakanya iseti yovavanyo oluvavanya izixhobo zeMac ukubona ukuba yonke into isebenza kakuhle kwaye oku kungcono ukwenza olu vavanyo lubonelelwa yi-Apple uqobo.
Kuya kufuneka siyicacise ngaphambi kokuqala kwenkqubo yokuba le ndlela yokufumana ingxaki ye-Hardware kwi-Mac yethu isebenza kuphela kwizixhobo ezithengwe phambi kukaJuni 2013. Zonke iiMacs ezithengiweyo emva kwalo mhla siza kuba ne-AHT kolunye uqeqesho esiza kulupapasha ngoMvulo.
Emva kokufunyanwa kwengxaki kwi-Mac enokuthi ihambelane nezixhobo zekhompyuter, ngokwenza olu vavanyo lulula sinokufumanisa ukuba leliphi na icandelo elibangela oko. Ke masibone amanyathelo ekufuneka siwalandele ukwenza olu vavanyo.
1 Ungalusebenzisa njani uVavanyo lweHardware yeApple
2 Ezinye iinkcukacha ukugcina engqondweni
Ungalusebenzisa njani uVavanyo lweHardware yeApple
Siza kukhupha unxibelelwano kuzo zonke izixhobo zangaphandle ngaphandle kwebhodibhodi, imouse, isikrini, uqhagamshelo lwe-Ethernet kunye nonxibelelwano kwindawo yokuphuma yombane. Uvavanyo lwe-Apple Hardware lunokubonisa umyalezo wemposiso ukuba awuzicimi zonke ezinye izixhobo, ke musa ukulibala ngayo.
Qinisekisa ukuba iMac ikwindawo yokusebenza eqinileyo, ethe tyaba, kwaye ezinzileyo.
Siyacima izixhobo kwaye sinokuqala uvavanyo.
Vula iMac yakho kwaye ubambe iqhosha le-D kwikhibhodi yakho. Bamba iqhosha le-D kude kuvele i-Apple Hardware Test icon:
Siza kukhetha ulwimi kwaye ucofe kutolo lwasekunene. Ukuba awusebenzisi imouse okanye i-trackpad, ungasebenzisa utolo olusezantsi nolokukhetha ulwimi kwaye ucofe iqhosha elibuyayo.
Ukuqala ukuvavanya, cofa indawo yovavanyo, okanye ucofe ku-T okanye kwi-Return key. Unokukhetha nokwenza uvavanyo olwandisiweyo ngaphambi kokuqala uvavanyo. Oku kuyakwenza uvavanyo olunzulu ngakumbi oluya kuthatha ixesha elide ukugqitywa.
Xa uvavanyo lugqityiwe, jonga iziphumo ezantsi ngasekunene kwefestile.
Ukuphuma kuvavanyo lweHardware yeApple, cofa ukuqala kwakhona okanye ucime ezantsi kwefestile.
Ezinye iinkcukacha ukugcina engqondweni
Ezinye iikhompyuter ze-Mac ezithunyelwa nge-OS X Lion v10.7 okanye kamva ziya kuqala kwi-Apple Hardware Test kwi-Intanethi ukuba ikopi yediski ayifumaneki kwidiski yokuqalisa okanye ukuba ubambe amaqhosha e-Option-D ngexesha lokuqalisa. Unxibelelwano lwe-Intanethi nge-Ethernet okanye nge-Wi-Fi luyafuneka.
Ukuba usebenzisa i-OS X Lion v10.7 okanye ngaphambili kwaye awukwazi ukuqala i-AHT, jonga ukuba unayo i-OS X yokufaka idiski ebizwa ngokuba yi "Applications Install Disc 2". Yifake kwi-drive yangaphakathi ye-optical okanye kwi-SuperDrive yangaphandle ngaphambi kokulandela amanyathelo angentla. Ukuba usebenzisa iMacBook Air (eLate 2010), qhagamshela iMacBook Air Software Phinda ufake ipen drive kwi-USB port.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » iapile » Tutorials » Ulusebenzisa njani uvavanyo lwe-Apple Hardware kwiiMacs ezithengiswe ngoJuni 2013
Jonga isihloko senqaku, kuba kubonakala ngathi libhekisa kwiiMacs zango-2013 kuphela.Ndinombindi we-MBP ka-2012 kwaye andikaze ndiyifunde ngenxa yesihloko esingalunganga.
Ukuphononongwa kunye nokubulela ngegalelo likaDaniel!